युगसम्बाद साप्ताहिक - संचारमन्त्री जी ! लौन यो बिन्ती लागोस्- महेश्वर शर्मा
Thursday, 04.09.2020, 12:01pm (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 09.17.2019, 12:09pm (GMT+5.5)
बडो जान्ने भएर म जस्तो मन्त्रीलाई काम अह्राउने रहेछ नभन्नु होला ! संकट पर्दा रैतीले गुहार माग्ने त हाम्रो परम्परा नै हो । अघि ‘महाराजकी दुहाई’ भनिन्थ्यो आज मन्त्रीकी दुहाई त भन्नैप¥यो नि । आज हामी यथेष्ट नभए पनि प्रत्येक क्षेत्रमा प्रगतिका पाइला अघि बढाउन उद्यत छौं । नेपाली भाषा साहित्यले पनि निकै फड्को मारिसकेको छ । भाषाविद्, विद्वान, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार सबैले सक्दो सेवा–सहयोग पु¥याउँदै आएका पनि छन् । तैपनि के ¥याङठ्याङ नमिलेर हो कुन्नि, आज नेपाली भाषा संकटमा छ । कताकता उच्चारणमा बाचकको र वाक्य रचनामा लेखक सम्पादकका कमजोरी या असावधानी जे भए पनि राष्ट्रको पहिचान गराउने भाषा नै विकृत रुपमा देखिन्छ भने लाजमर्दो हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रभाषाप्रतिको असावधानी या उपेक्षाप्रति विनम्रतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउनुलाई अन्यथा सम्झिइने छैन भन्ने विश्वास लिएको छु ।
गतिलो काम भयो भने थोरैले पनि मान्छेलाई उठाउँछ मात्र होइन, इतिहासै बन्दो रहेछ । तपाईंले गर्नु भएन भनेको होइन, प्रशस्त गर्नुभा’छ । तर, ती काम समयक्रममा अधिकांश हावामा उडेर जानेमा पर्छन् । प्रदीप नेपाल मन्त्री हुँदा उहाँले आफ्नै पार्टीका कामरेडहरुको बिरोध हुँदाहुँदै पनि नेपाल रेडियोबाट विहान संस्कृतमा समाचार प्रसारण आरम्भ गराएर ऐतिहासिक काम गर्नुभयो । आज जनताले प्रदीपको प्रशंसा गरिरहेको सुनिन्छ । त्यस्तै नमेटिने कामबाट परिचय स्थापित हुँदोरहेछ ।
नेपालमा त हुने नै भयो, आज विदेशमा समेत बदनामी कमाउने काम रेडियो–टेलिभिजनका अशुद्ध भाषा समाचारले गरिरहेको मन्त्रीजीलाई पनि बिझेकै होला । देशको परिचय दिनेमा भाषाको पनि महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । उदाहरणका लागि हाम्रा समाचार वाचक (केही लेखक पनि हुनसक्छन्)हरुले विध्यालय, उद्दोग, विद्धुत जस्ता उच्चारण गरेको सुन्दा उदेक लाग्छ । चाहनुभयो भने तपाईंले अहिले सुधार ल्याउनसक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । मौकामा गरेका राम्रा कामले भोलि पनि सम्झाउँदो रहेछ प्रदीप नेपाललाई सम्झाए जस्तै ।
अघि गोभाप्रस. थियो । त्यसको उत्तराधिकार नेभाप्रस.मा स¥यो । त्यसमा देवकोटा, सम जस्ता विद्वान थिए । अशुद्धिको सम्भावना कमै थियो । त्यसपछिको उत्तराधिकार साझा प्रकाशनमा सुम्पिएपछि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाएर साझा समाप्त जस्तै छ । त्यसको फल नेपाली भाषाले दुगर्ति व्यहोर्न परेको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि दर्शक मात्रै भएको छ ।
सरकारका ध्यान ठूलठूला कुरामा केन्द्रित हुने भएर हो कि, भाषा संरक्षणको जिम्मा कसैले लिएको पाइँदैन । सूचना पाटी पनि ‘दीवा सेवा’– ‘पशुपति सर्ण’ लेखेको देखिन्छ । विज्ञापन दाताले पनि आफ्नो विज्ञापन गलत होस् त भन्दैन होला । तर रेडियोमा ‘शक्तिशाली लुगा धुने साबुन’ भनेको सुनिन्छ । साबुनलाई शक्तिशाली भन्ने खोजिएको होला तर यहाँ लुगा शक्तिशाली र साबुन शक्तिहीन जस्तो भयो । यी उदाहरण मात्रै हुन् ।
मन्त्रीजी स्वयं पत्रकार हुनुहुन्छ । एकदुई ताजा उदाहरण हरांै– “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले आज बालुवाटारमा भेट गर्नुभयो”– यो समाचार यही भदौ २३ गते साँझ ७ बजेको रेडियो नेपालको हो । त्यस्तै केही समयअघिको रेडियो समाचारमा “भारत सरकारका तर्फबाट हालै नेपालमा आएको बाढी पहिरो पीडितका लागि प्राप्त सहायता ......” भनिएको थियो । के चिनीया विदेशमन्त्री हाम्रा प्रधानमन्त्रीसंग नेपाल आएका हुन् ? के त्यो बाढी पहिरो भारत सरकारका तर्फबाट आएको थियो ? यस्ता वाक्य रचनाका समाचार यहाँ प्रतिदिन प्रसारित भैरहेको मन्त्रीजीले सुन्नुभएकै होला ।
मन्त्री सधैंभरि भइँदैन । त्यसैले मौकामा हीरा फोर्नुप¥यो । मन्त्री हुँदा तारीफ गर्ने धेरै हुन्छन् । मन्त्री नहुँदा पनि तारीफ हुने मन्त्रीको खाँचो छ यहाँ । त्यो खाँचो तपाईंले पूरा गरिदिनुप¥यो । तपाईको आदेश मात्र भए पुग्छ । त्यस निम्ति प्रेसहरु र रेडियो–टेलिभिजनका प्रांगणहरुमा कम्तिमा डेढ दुई सय शब्दको शुद्धाशुद्धी बोर्ड राख्न लगाइदिनुभयो भने त्यत्तिले पनि तपाईंको सम्झना स्थायी हुनेछ ।
मन्त्री जी ! तपाईंसंग मान्छेको कमी छैन । जिम्मा दिएर काम गराउने शक्ति र सामथ्र्य पनि छ । चाहना मात्र अघि सारिदिनुभयो भने यो काम सम्पन्न भएर विध्यालय अत्याधिक जस्ता अशुद्ध शब्द सुन्नुपर्ने छैन । नेपाली भाषा शुद्धिका क्षेत्रमा ठूलो काम हुनेछ । लौन, यो बिन्ती लागोस् मन्त्री जी !